Niverina madio ny ranon’i JIRAMA eto Antsirabe - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Zary niloko mavo ny ranon’i JIRAMA eto Antsirabe narosony ho an'ny mpanjifany. Noho ny ranon’orana. Fahavaratra rahateo ny andro, ka niova loko ny rano. Teo aloha teo, nimenomenona ny olona noho ny fofon’ny “eau de javel” ampiasain’i JIRAMA hanadiovana ny rano fisotro mba ho ara-pahasalamana kokoa. Vao mainka natahotra ny mponin’Antsirabe, satria lasa mavobe, miendrika maloto, ilay rano nandritra ny telo andro, nanomboka ny alahady 1 marsa teo.
Marihina fa toraka izany ihany koa ny an’ireo mampiasa vovo na lava-drano, mifangaro ny rano madio sy ny ranon’orana ka lasa tsy azo hidiovana na hanasàna lamba.
Raha ny fanentanan’i BNGRC ombieny ombieny, mba hisorohana ny aretina mety hitranga dia tokony ho rano avy nampangotrahina no sotroina ary amin’izay, azo antoka fa hofaty daholo ny mikiraoba na ireny bibikely mitondra tsimok’aretina ireny. Manana andraikitra lehibe manoloana ny fahasalamam-bahoakany JIRAMA. Mikofoka mafy tokoa izy ireo ary mbola manohy izay ezaka efa vita mba hitsinjovana ny mpanjifany, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra ambony ao amin’ny Jiro sy Rano Malagasy, RAMELSON Jaonera. Marihana manokana ihany koa hoy izy ireo, fa ny antony tena naha mavobe ny rano, ao Antsirabe, dia ny fivarinan’ireo rano maloto vokatry ny oram-be any amin’ny loharanon’i JIRAMA : Andraikiba, mpamatsy ny tapany atsimo ary Andranobe ny avaratra. Araka izany, mila mailo sy mitandrim-pahasalamana ny tsirairay amin’izao anatin’ny faharatsian’ny andro sy ny rivo-doza izao, satria mitombo haingana ary mora mahazo vahana ny mikiraoba rehefa fotoana tahaka izao. Sady ny lalana voalohany hahatafidiran’ny aretina amin’ny vantan’olombelona, dia ny rano, ka vokatr’izany ny aretin-kibo amam-pivalanana matetika mpahazo ny ankizy, ary mety hamono raha tsy voatsabo malaky. Avy amin’ny fisotroana rano mangatsiaka ihany koa no mahatonga ny sery na ny gripa mahery, ka mainka moa fa raha rano mangatsiaka sady maloto no ho sotroina.
Ny fahasalamana no voalohan-karena
Eto Madagasikara, anisan’ny sehatra be mpanohana sy mpikarakara ary handrotsahan’ireo mpamatsy vola ny volan’izy ireo ny mikasika ny fahasalamana. Ary na ny Firenena Mikambana aza, dia manana sampana lehibe manokana momba io, ny “Organisation Mondiale de la Santé” na ny OMS izay misandrahaka eran-tany. Tsy ambaka izany ireo karazam-pikambanana nasiônaly eto amintsika, ireo orinasa isan-karazany izay mirotsaka amin’ny fikojakojana ny ara-pahasalamana, amin’ny alàlan’ny fanadiovana ny tontolo iainana sy amin’ny fiaraha-mientana mamboly hazo. Ny tapaky ny volana febroary teo ka hatramin’izao no nanaovan’ireo sekoly, fiangonana, fikambanana ary orinasa fambolen-kazo tao Antsirabe. Iray ihany hoy izy ireo ny tanjona, dia ny hananana fahasalamana noho ny tontolo iainana madio : ny rivotra ary indrindra ny rano. Mifandraika amin’ny fahasimban’ny tontolo iainana manko ny fahalotoan’ny ranon’i JIRAMA tao Antsirabe, izay lasa mavobe, hoy Razafindrabe Célestin, manam-pahaizana manokana momba ny ekôlôjia. Tsy ampy ny hazo tokony hitàna ny nofon-tany izay kahon’ny riaka, hany ka lasa midina mankany amin’ny loharanon’i JIRAMA ny ranoriaka izay miteraka fahamavoan’ny rano eny amin’ny paompy, araka ny filazan’ity manam-pahaizana ity. Raha ny eto Antananarivo, izay mbola anatin’ny ranobe tanteraka, sady maloto, hananosarotra ny fanarenana ny simba sy ny takaitran’ny rivo-doza nitondra oram-be. Atao ahoana tokoa moa ny ho salama amin’izany ? Ny rano sotroina aza maloto, tsy ara-pahasalamana. Ary raha misotro rano tsizarizary daholo ny Malagasy, mety hisy fahavitrihana handroso ve ? Saingy ny laharam-pahamehana ary angatahina amin’Andriamanitra aloha izao, dia mba ho salama tsy hanahy ireo havana rehetra tra-boina eto Madagasikara, fa indrindra ny eto afovoan-tany.